စတုဒီသာမှာ လေးခါတောင်ထပ် ထည့် ရတဲ့အထိ အားရပါးရစားခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး – XB Media Myanmar
စတုဒီသာမှာ လေးခါတောင်ထပ် ထည့် ရတဲ့အထိ အားရပါးရစားခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီး တစ်လက်လည်းဖြစ်သလို ချစ်စရာကောင်းပြီးသ ရုပ်ဆော င်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေးကတော့ ဖွေးဖွေးဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးဖွေးကတော့ မကြာသေးခင်က ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆံမြိတ်လေးကြောင့် ပရိသတ်တွေကသဘော ကျနေ ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာတော့ ဖွေးဖွေးတစ်ယောက် အလုပ်တွေသာရှုပ်ကာ ရုပ်ရှင်ကန် တော့ပွဲရောက်နေခဲ့သလို စတုဒီသာကိုသွားစားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်း စတုဒီသာမှာ အဝစားနေတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အတူ “ThrowBack to ဘယ်လင်တိုင်းဒေး..ဘဲဥ သီးစုံပဲကုလားဟင်း စတုဒီသာ ကိုယ်လှူရတာလည်းအရသာရှိသလို အလှူမှာလိုက် စားရ တာ လဲ သိပ်အရသာရှိတာဖဲ” လို့ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးဖွေးကတော့ စတုဒီသာမှာ စားလို့ကောင်းပြီး လေးခါတောင်ထပ်ထည့်ရတဲ့အကြောင်းကို တင်ထားပါသေးတယ်။
ဖွေးဖွေးကတော့ ဟန်ဆောင်မှုမရှိဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေထိုင်တတ်သလို မာန်မာနမ ရှိတဲ့သူလေးတစ်ယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ်တိုင်ကလည်း အလှူတွေလုပ်သလို သူငယ်ချ င်းတွေရဲ့အလှူမှာလည်း အားရပါးရသွားစားတတ်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စတုဒီသာမှာ လည်း လေးခါတောင်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ အားရပါးရစားခဲ့တဲ့ဖွေးဖွေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေက အရမ်းတွေသဘောကျနေကြပါပြီနော်….
Rose – CeleGabar,Reference&Credit:Celegabar.com
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ထိပ္တန္းမင္းသမီး တစ္လက္လည္းျဖစ္သလို ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးသ ႐ုပ္ေဆာ င္ေကာင္းတဲ့ မင္းသမီးေလးကေတာ့ ေဖြးေဖြးျဖစ္ပါတယ္။ေဖြးေဖြးကေတာ့ မၾကာေသးခင္က ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ဆံၿမိတ္ေလးေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကသေဘာ က်ေန ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဗယ္လင္တိုင္းေဒးမွာေတာ့ ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ အလုပ္ေတြသာရွုပ္ကာ ႐ုပ္ရွင္ကန္ ေတာ့ ပြဲေရာက္ေနခဲ့သလို စတုဒီသာကိုသြားစားခဲ့ပါေသးတယ္။အဲ့ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း စတုဒီသာ မွာ အဝစားေနတဲ့ပုံေလးေတြနဲ႔အတူ “ThrowBack to ဘယ္လင္တိုင္းေဒး..ဘဲဥ သီးစုံပဲကု လားဟင္း စတုဒီသာ ကိုယ္လွူရတာလည္းအရသာရွိသလို အလွူမွာလိုက္ စားရ တာ လဲ သိပ္အ ရသာရွိတာဖဲ” လို႔ ေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ေဖြးေဖြးကေတာ့ စတုဒီသာမွာ စားလို႔ေကာင္းၿပီး ေလးခါေတာင္ထပ္ထည့္ရတဲ့အေၾကာင္းကို တင္ထားပါေသးတယ္။
ေဖြးေဖြးကေတာ့ ဟန္ေဆာင္မွုမရွိဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေနထိုင္တတ္သလို မာန္မာနမ ရွိတဲ့ သူေလးတစ္ေယာက္လို႔ဆိုရမွာပါ။ကိုယ္တိုင္ကလည္း အလွူေတြလုပ္သလို သူငယ္ခ် င္းေတြ ရဲ့အလွူမွာလည္း အားရပါးရသြားစားတတ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စတုဒီသာမွာ လည္း ေလး ခါေ တာင္ထပ္ထည့္ၿပီးေတာ့ အားရပါးရစားခဲ့တဲ့ေဖြးေဖြးကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြက အရမ္းေ တြသေဘာက်ေနၾကပါၿပီေနာ္….
(၂၁)နှစ်ကြာ ငိုခဲ့ရ ပျော်ခဲ့ရတဲ့အ ချိန် တွေကို ကာတွန်းလေးအဖြစ်ပြန် လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ စမိုင်းလ် တို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး”
ပရိသတ်တွေနဲ့ စုပေါင်းပြီးဆေးပဒေ သာပင် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး